Introduction to SMT Week #3 - Dlike News — Steemit
Introduction to SMT Week #3 - Dlike NewssteemCreated with Sketch.
Dlike ကို SP delegate လုပ်တဲ့သူတွေကို လဲ Dlike token တွေကို 1:1 နဲ့ပေးနေပါပြီ။ အဲ့ ဒိအပြင် 5% beneficiary ဆုကြေးလဲ ရရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dlike ကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်းစာရေးစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ပိုစ့်တွေကို Dlike မှာ share လို့ရပါတယ်။ "Proof of Brain" လိုခေါ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို Dlike ကနေ upvote ပေးနေပါတယ်။ Dlike ရဲ့ SP ကလဲ ၁၁၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ နောက်ကိုလဲ ဒိထက်များလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted from my blog with SteemPress : https://myanmarpress.xopus.io/?p=296
steempress steem msu dlike smt
meme တုန်းကလဲ ဆရာပြောပြခဲ့လို့ စစချင်း 1 SBI share ရသလို ကံထူးခဲ့လို့ 10 SBI share ထပ်ရခဲ့ပါတယ် ဒါတွေအားလုံးဟာ ဆရာလမ်းညွှန်ပြသခဲ့လို့ ရရှိခဲ့တာပါ
welcome bro. အခုလိုလိုက်လုပ်မဲ့သူ ရှိတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဘရို။
bro ရော top dlike user ထဲ ပါဘူးလားဗျ
kokokyaww (31) ·2months ago
ayethatmon (46) ·2months ago
Dlike က လွယ်ပါတယ် sis. ဘာစာမှကို ရေးနေစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာကို copy ကူးပြီး shaer လိုက်ရုံပဲ/
nayhlaingsoe (47) ·2months ago